iOS 11 သည် Beta 1 မှ Beta 10 သို့ပြောင်းလဲသွားသည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
iOS 11 သည် Beta 1 မှ Beta 10 သို့ပြောင်းလဲသွားသည်
၎င်းသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်အစ မှနေ၍ သင်တို့အတွက် iOS 11 Betas အားလုံးကိုစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်မည်သို့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်ကိုသင်တွေ့မြင်နိုင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။ သို့သော်ဖတ်ရှုခြင်းမှာ၎င်းကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်မျက်စိဖြင့်မြင်ခြင်းနှင့်မတူပါ။ iOS 11 ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသောဗွီဒီယိုကိုပထမဆုံး Beta မှနောက်ဆုံးထင်မြင်ချက်သို့ချန်ထားလိုက်သည်။
ဒီနှိုင်းယှဉ်ဗီဒီယိုတွေကိုကြိုက်တယ်၊ အထူးသဖြင့်သင်သည် operating system ၏ Beta ဗားရှင်းကို install လုပ်ရန်မစွန့်စားသေးသောနောက်ခံအခြေအနေကြောင့် iOS ကိုစိတ်ပျက်အားလျော့စေသည့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒီစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဂရပ်ဖစ်စမ်းသပ်မှုနဲ့သွားကြရအောင်။
ဒီဗီဒီယိုသည်စိတ်ကူးယဉ်ယောက်ျားလေးများကိုတစ်ဖန်ပြန်လည်တာဝန်ယူသည် နေပြည်တော် ဒီစွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းထားခဲ့တာပဲ။ ပထမ ဦး ဆုံး Beta ကတည်းကကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သောအရေးအကြီးဆုံးပြောင်းလဲမှုသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး စွာရေတွက်ရမည်, နှင့် iOS 11 ၏ပထမမူကွဲ ၅ ခုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဘက်ထရီယိုစီးမှုကြောင့်ပုံမှန်နေ့စဉ်အတွက်အသုံးပြုရန်မဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါ ။
ဆွဲယူထားပြီးဖြစ်သောနောက်ထပ်မကောင်းသောအမှုဖြစ်ခဲ့သည် ဖန်သားပြင်တည်းဖြတ်ခြင်းစနစ်အသစ်ရှိခလုတ်များ၏တည်နေရာနှင့် 3D Touch တွင်အမြဲတမ်းမတိကျမှုများ။ လောလောဆယ် iOS 11 Beta 10 သည်ရှင်းလင်းသော Beta မှကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုနိုင်သည့်အရည်အသွေးစံနှုန်းများအတွင်းအပြည့်အဝပွတ်တိုက်ထားသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဖြစ်မှန်မှာယနေ့ iOS 11 ကိုအပြည့်အဝထိရောက်သောစနစ်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Beta 10 ဖြစ်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည် ရွှေတံဆိပ်ကျနော်တို့က 19:00 pm မှာလာမယ့်တနင်္လာနေ့သည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်ပေမယ့်။ ၄ ရက်အကြာမှာမရေမတွက်နိုင်တဲ့သတင်းများပါသောအသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက် iOS4နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 11 » iOS 11 သည် Beta 1 မှ Beta 10 သို့ပြောင်းလဲသွားသည်
Fuaaaaaaaaaaa !!!! တနင်္လာနေ့အထိကြာရင်ငါမသိဘူး ...
ယခု Aifon ၏တရားမျှတမှုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလျှင်!
3D Touch တွင်အမြဲတမ်းတိကျမှုများ
သူတို့က 3D Touch ကိုနေ့တိုင်းငါလိုအပ်တာဖြန့်ချိကတည်းက။
Uuuuuuuuh … သူမပါဘဲငါမနေနိုင် ...
တနင်္ဂနွေနေ့၏အားသာချက်များကိုရယူရန်အတွက်အခမဲ့လျှောက်လွှာ ၃ ခု
မည်သူမျှ iPhone7၏ "s" ထုတ်ဝေမှုကိုမလိုအပ်ပါ